Ndụmọdụ 5 iji bulie azụmaahịa gị na ekwentị mkpanaaka | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 30, 2010 Na Tọzdee, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
Ntughari ekpughere ndụmọdụ ise ga - enyere ụlọ ọrụ aka melite ahụmịhe mkpanaka ma dọta ndị ahịa ọhụrụ:
Malite na ahụmịhe onye ọrụ: Ezi njirimara onye ọrụ bụ echiche dị elu maka ịga nke ọma na ekwentị. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ na-anwa i mimomi arụmọrụ webụsaịtị ọdịnala na akụrụngwa ha. Iji hụ na ezigbo mkpanaka eji eme ihe, gbado anya na mkpa ndị ahịa na azụmaahịa, nke nwere ike ịdị iche na nke ọdịnala ọdịnala. Ihe dị mfe dịka nha bọtịnụ (ha ezuru?) Ma hụ na enweghị ịpịgharị akụkụ na-elegharakarị anya na mbọ mbụ ma nwee ike ikpuchi ọbụlagodi arụmọrụ kachasị. Bido site na ịge ndị ahịa gị ntị: chọpụta otu ha chọrọ iji soro ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ site na ekwentị mkpanaaka yana otu ha si eji ọwa ekwentị ugbu a iji mezuo ebumnuche ha. Jide n'aka ịzụlite nyiwe mkpanaka kwesịrị ekwesị maka mkpa ndị ahịa, ma jide n'aka na atụmatụ gị nwere ihe ịma aka pụrụ iche nke ahụmịhe mkpanaka.
Echekwala na ị chọrọ ngwa: Maka ụfọdụ azụmaahịa, ị na-eme ya; n'ihi na ndị ọzọ, ọ bụghị kwesịrị ego, na ị ga-eme ka mma itinye ego na mkpanaka gị web ọnụnọ. Chee uru na ọghọm dị na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka nwere mkpokọta ahịa ma nwee ike ịnweta ya site na ụdị ekwentị mkpanaaka niile. Mana ka ngwa ngwa mkpanaka na-erute mmadụ ole na ole karịa ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka, ọtụtụ azụmaahịa niche na-ahọrọ ọwa ahịa a, ebe ọ na-enye ndị na-azụ ahịa ahụmịhe pụrụ iche, gbadoro anya na-enweghị nanị smartphones.
Echekwala na ekwentị na-apụtakarị mkpanaka: Dị njikere ịnye njikọ pụtara ìhè na weebụsaịtị gị zuru oke maka onye ọ bụla chọrọ ịnweta ya. Ugbu a akuku nke smartphones nwere ike mfe sọfụ kasị zuru weebụsaịtị, na mfe eziokwu bụ na ọtụtụ mobile saịtị dị adịghị enye ohere otu atụmatụ dị na zuru website-atụmatụ na ọtụtụ ndị ọbịa chọrọ ma ọ bụ mkpa iji mgbe ha na-aga . Ọ bụ ezie na ọ dị mma iji nyochaa njikwa akụ gị site na saịtị mkpanaka, ọ nwere ike bụrụ ihe dị oke egwu iji kwụọ ụgwọ site na iji ngalaba ịkwụ ụgwọ ụgwọ nke saịtị zuru ezu nke anaghị ebugharị na ekwentị.
Leverage ndị adịlarị, teknụzụ mkpanaka efu iji jikọọ na ndị na-ege ntị: N'agbanyeghị ma ụlọ ọrụ gị ụlọ ọrụ na-kacha mma nyekwara ke a mobile ngwa, ọtụtụ ama ẹdude teknụzụ nwere ike inyere gị jikọọ na mobile kiriri enweghị a nnukwu ego na technology mmepe. Ewu ewu na ọrụ ndị dabere na ọnọdụ dịka Foursquare na Facebook Places agbanweela ụzọ ụdị ndị ahịa nwere ike isi zụọ ahịa na ndị ahịa site na ikwe ka ụlọ ọrụ brik na-ngwa ngwa chọpụta ma kwụghachi ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe ụgwọ dị iche iche na ego dị iche iche. DialogCentral bụ ihe atụ ọzọ nke teknụzụ mkpanaka n'efu na-agba ume itinye aka: n'iji ngwá ọrụ a, ndị na-azụ ahịa nwere ike izipu nzaghachi ozugbo na azụmaahịa ka ha na-agagharị, azụmaahịa ga-enwetakwa azịza ndị ahịa ozugbo.
Mụta irè mobile mmesho kpuchie: Otutu ulo ahia nke oge a adighi ike hazie ike nke oma. Nke mbụ, laa azụ ma jiri nlezianya tụlee ihe enwere ike ịtụ nha. N'ebe a na-agagharị agagharị, usoro metrik anaghịzi adị, yabụ chọọ ihe ndị ga-aza ọwa niile nke akara ọhụụ ugbu a, dịka itinye aka na ndị ahịa. Mgbe ahụ, kọwaa akụkụ ndị dị mkpa iji tinye ụdị ihe a na njirimara pụrụ iche nke azụmaahịa gị. Tụlee ntinye, nzaghachi mmeghe ederede dị ka akụkụ nke usoro ihe nlele gị iji hụ na ị na-eme mkpebi maka mkpa ndị ahịa kama karịa echiche ụlọ ọrụ.
Dika otutu ndi ahia na-adabere na ngwa mkpanaka ha na ngwa mkpanaka maka ihe nile site na ahia na ntaneti na ntinye akwukwo ezumike, ichekwa ego, na ugwo ego, ndi oru ahia kwesiri imeputa ihe omuma nke na adighi nma ma gee nti ihe ndi ahia ha na ekwu banyere ha. Rand Nickerson, onye isi oche nke OpinionLab
Tags: uto mkpanakaahịa efu
Isi ihe iji zụlite azụmahịa na ekwentị mkpanaaka…